Roobabkii dayrta oo ka da,ay meelo badan oo ka tirsan gobolada Sool,Sanaag iyo Cayn .
Laascaanood,05 Dec 2003.Waxaa ilaahay shalay u shubay raxmadiisii dadka ku dhaqan deegaamo fara badan oo ka mid ahaa deegaanadii ay sida badan abaaruhu u saameeyeen,deegaanadaas oo u badnaa gobolada waqooyi,sida Togdheer,Sanaag,Sool,Cayn,iyo dhulal kale oo badan.
Sida uu noogu soo waramay weriyaheena ku sugan magaalada Laascaanood weriye Cabdiraxmaan Axmed Xassan(Sayn),waxa fiidkii,habeenimadii khamiista ee Jimcuhu soo galayey ka da,een roobab lixaad lehi magaalada Laascaanood iyo nawaaxigeeda,roobabkaasoo sida uu Cabdiraxmaan noo sheegay badanaa dadka ku dhaqan magaaladaasi ay tubnaayeen banaanka,oo si ka duwan roobabkii hore uga di,i jiray dhulkaas,loogu riyaaqay.
Roobabkaas oo ahaa roobab lagu qabowsaday,waxa uu weriyaheenu noo xaqiijiyey inay baraago badan oo ku yaal meelaha ay ka mid yihiin Saaxdheer,Dharkayn,Dabataag,Domco ay biyo badani galeen.Dhumay iyo Kalabaydh iyaga wararkii ugu danbeeyey waxa uu wariyaheenu noo sheegay inay ilaa salaan,salaan gashay.Dhinaca kale deegaanada Fiqi fuliye, Kulaal, Dararweyne, Hadaaftimo,Taleex,Adhicadeeye,Sarmaanyo,Boocame,iyagana waxa wariyaheenu noo soo sheegay inay dhinacaas roobabku ku xoogan yihiin oo laga soo shaagay khasaarooyin badan oo naf iyo maalba leh.Dhinaca gobolka Cayn waxa roobab lagu diirsaday laga soo sheegay deegaanada ay ka midka yihiin Dan-dan, Qararo, Xamar-lagu xidh iyo Magaalada Bali cad,meelahaas oo baraaguhu duurka joogaan.
Isku soo wada duuboo waxa ilaahay adoomahiisa kadib baryo badan oo ilaahay la baryay u shubay roobabkii dayrta oo wakhtigan ku soo aaday wakhti quus la taagnaa,roobabkaasina dhamaan deegaanada gobolada Togdheer,Cayn,Sool,Sanaag,Nugaal iyo dhamaan dhulka ay degaan umada soomaaliyeed waa wada gaadhsiisan yihiin,waa jiraan meelo ay hogashu ka yara booday,balse waxay insha,alaah ka cabi doonaan meel aan sidaa uga durugsanayn.
Sida laga soo waramayo meelo badan oo ka mid ah deegaanada ay roobabku aadka uga da,een waxa ka mid ah,iyada oo aanay xoolihii awoodoodii daciiftay,taasoo keentay inay dabaysha iska xajin waayaan,waxaana la filayaa in in badan xoolaha soo doogay ka mid ahi ay roobabka iska xajin waayaan,balse roobabkani waxay markhaati u yihiin in ilaahay aan raxmadiisa marna laga quusan,oo uu adoomihiisa hadii ay baryaan uu ajiibayo.
Cabdiraxmaan Axmed Hassan (Sayn)